आर्टिकल Archives – healthykhabar.com
विराटनगरस्थित एक अस्पतालमा कार्यरत एकजना नर्स कोरोना सङ्क्रमित भएर यतिखेर निको भइसक्नुभयो । पाँच वर्षअघिदेखि उहाँ विराटनगरको उक्त अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँको गुनासो सुन्दा लाग्छ कोरोना सङ्क्रमित हुनु भनेको ठूलो पाप नै गर्नु हो । अस्पतालका केही कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि उहाँलगायत अस्पतालमा कार्यरत व्यक्तिहरूको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो । त्यहीबेला उहाँलाई कोरोना पोजेटिभ देखियो । कुनै लक्षण नभएपछि उहाँलाई ‘होम आइसोलेसन’मै बस्ने रहर थियो तर त्यतिबेलाको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमले उहाँ जबर्जस्ती अस्पतालमै बस्नुपर्याे । परिवारलाई भनिनँ दश दिनको अस्पताल बसाइमा उहाँले आफ्नै साथीहरू अर्थात् स्वास्थ्यकर्मीबाट राम्रो व्यवहार पाउनुभएन । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहारले दिक्क भएपछि उहाँलगायत अन्य सङ्क्रमितले कोशी अस्पताल अन्तर्गतको कोभिड अस्पतालका प्रमुखसमक्ष उजुरी नै गर्नुप¥यो । उजुरीपछि उनीहरूको व्यवहार सुध्रिँदै गयो । उहाँले आफ्नो कोरोना अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो, ‘सङ्क्रमित स्वास्थ्यकर्मीलाई त उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीबाटै घृणा हुन्छ भने अरू सङ्मितले कस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको होला !’ आफ्नै साथीभाइको व्यवहार यस्तो भएपछि उहाँले आफू सङ्क्रमित भएको कुरा श्रीमान्बाहेक…
१८ महिनाको बालकसहित १२ जनामा कोरोना पोजेटिभ
चितवन,२४ भदौ । चितवनमा १८ महिने बालक सहित १२ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको चछ । २५७ जनाको नमुना परीक्षण गर्दा १८ महिनाको बालकसहित १२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । भरतपुर अस्पतालअन्तर्गतको कोभिड–१९ प्रयोगशालाले बधुबकार विहान सार्वजनिक गरेको विवरणमा १८ महिने बालकलाई समेंत कोरोना पुष्टि भएको जनाइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका ७ महिला र २ पुरुष गरी ९ जनामा संक्रमण देखिएको छ । यस्तै संक्रमितहरु ९ वर्षदेखि ५४ वर्ष उमेर समूहका छन् । चितवनकै माडी नगरपालिकाका १८ महिने बालक र २७ वर्षीय युवकमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भंंएको छ । यसैगरी सिन्धुपाल्चोकका ३९ वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ
कोरोना समुदायमा फैलियो भने जटिल रुप लिन सक्छ,सतर्कता अपनाउ: डा. वासुदेव पाण्डे
काठमाडौँ, २ भदौ । कतिपय चिकित्सकहरु तराइमा कोरोना भाइरस संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिसकेको बताउँछन् । त्यसोत काठमाडौंमा पनि दिनदिनै संक्रमितहरुको संख्या बढीरहेको छ । दिनहुँजसो डाक्टर, नर्स तथा अस्पतालका अन्य कर्मचारीहरुमा कोरोना भाइरस देखिरहेको छ । तीनदिन यता त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एक दर्जन बढी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोरोना देखिइसकेको छ । त्यस्तै वीर अस्पतालका चिकित्सक, गंगालाल अस्पतालका चिकित्सक तथा नर्स, प्रसूति गृहका चिकित्सकहरुमा समेत कोरोना देखिसकेको छ । नेपालभर चारसय भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरु संक्रमित भइसकेका छन् । शनिबार पनि उपत्यका र उपत्यका बाहिरका केही अस्पतालका डाक्टर , नर्स सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेत कोरोना देखियो । दिनहुँ यसरी डाक्टर, नर्सलाई समेत कोरोना देखिदै गएपछि जनमानसमा नराम्रो असर पर्न गएको छ । के अब काठमाडौमै कोरोना समुदायस्तरमा देखिएको हो त ? केही जनस्वास्थ्यविदहरु कोरोना समुदायमा फैलिसकेको चर्चा गर्न थालेका छन् भने केही जनस्वास्थ्यविद अहिलेसम्म कोरोना फैलिनसकेको तर समुदायमा फैलनसक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् इपिडिमियोलोजी तथा…
जनसम्पर्क कार्यालयमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दो
हेटौँडा, २भदौ । गत साउनयता बाग्मती प्रदेशका जिल्लामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दर बढेसँगै उच्च अधिकारीहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दो छ । जनसम्पर्कमा रहने जनप्रतिनिधिदेखि प्रशासकसम्ममा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो पटक काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डनदेउनपुर १२ का वडाध्यक्षदेखि बाग्मती प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिवसम्ममा कोरोना सङ्क्रमण पुुष्टि भएको छ । उच्च सुरक्षा अधिकारी, चिकित्सक, बैङ्कर लगायतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएपछि उच्च अधिकारीहरू कोरोना जोखिममा रहेको पुष्टि भएको हो । प्रशासकहरू उच्च सतर्कता अपनाउँदै नारायणगढ समाचारदाताका अनुसार भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीलाई कोरोना पुष्टि भएसँगै टे«सिङमा परेका चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईसहित जिल्लाका उच्च पदस्थ व्यक्तिले थप सतर्कता अपनाउँदै आफ्नो काम गर्न थाल्नुभएको छ । टे«सिङमा परेर उच्च जोखिममा रहनुभएका जिल्लाका महŒवपूर्ण व्यक्तिले सेल्फ क्वारेनटाइनबाटै दैनिक कामकारबाही थाल्नुभएको चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । कोरोना सङ्क्रमणको हटस्पर्ट बनिरहेको भरतपुर अस्पतालका मेसु डा. तिवारीसँग प्रजिअ भट्टराई लगायतका व्यक्तिको पटक–पटक बैठकमा सहभागी हुँदै आउनुभएको थियो ।…
स्वास्थ्य मन्त्रालयका चार कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं,२५ साउन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका चार जना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयका प्रबक्ता डा जागेश्वर गौतमले शुक्रबार (सिसिएमसी) को टोलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका ८४ जना कर्मचारीको स्वाब संकलन गरेकोमा चार जनालाइ कोरोना पुष्ठि भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले ती कर्मचारीलाई आइसोलेसनमा राखिसकेको जानकारी दिदै संक्रमित कर्मचारीको सम्पर्कमा आएका ब्यक्तिको पहिचान हुन बाकी रहेको बताउनुभयो ।
कोरोना परीक्षणका लागि २० संस्थाको निवेदन
काठमाडौं,१५ साउन । उपत्यकामा रहेको सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले नमूना परीक्षणका लागि महाशाखामा निवेदन दिएका छन् । महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्रध्वज अधिकारीले २० भन्दा बढी सङ्घ संस्थाले आफ्ना कर्मचारीको नमूना परीक्षणका लागि निवेदन दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारी कार्यालय, बैंक, खेलकूद सङ्घ, उद्योग प्रतिष्ठानले परीक्षणका लागि निवेदन दिएका छन् । अहिले २९ प्रयोगशालाबाट तीन लाख ५८ हजार ३४४ जनाको नमूना परीक्षण गरिएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा १९ हजार २७३ जना सङ्क्रमित रहेकोमा १४ हजार २१ जना पूर्ण रुपमा निको भइसकेका छन् भने सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच हजार २०३ रहेको छ । रासस
संविधानले दिएको अधिकार माग्दा सरकारले अपराधी जस्तो व्यवहार गर्‍यो: डा. केसी
डडेलधुरा,२३कार्तिक।दुर्गम अजयमेरुबाट भेट्न आएका जयबहादुर ऐर र डोटीको बान्डुग्री सैनका हिक्मत बलायर शुक्रबार दिउँसो डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको कोठाबाट आँसु पुछ्दै निस्किए । त्यतिबेला गेटमा पहरा दिइरहेका दुई प्रहरी, कोठामा ब्लड प्रेसर जाँच्न आएकी स्वास्थ्यकर्मी र डडेलधुराकै ईश्वरीप्रसाद भाटका पनि आँखा रसाएका थिए ।भेट्न आउनेहरूसँग कुरा गरिरहँदा डा. केसी बेलाबेला भक्कानिन्छन् । यो देखेर आउनेहरूको मन थामिँदैन । उनीहरूका आँखा रसाइहाल्छन् । शुक्रबार पनि त्यस्तै भयो, ऐर र बलायरसँगको भेटमा । ‘म आफू र आफन्तका लागि या कुनै माफियाको फाइदाका लागि अनशन बसेको हुँदै होइन,’ डा. केसी भन्दै थिए, ‘बाजुरादेखि ओखलढुंगासम्मका गरिब जनताले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भनेर अनशन बसेको हुँ ।’डडेलधुरा अस्पताल नजिकैको एउटा चिसो कोठामा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै अनशन बसेका डा. केसीलाई भेट्न आउने जोसुकैलाई पनि उनी भन्न छुटाउँदैनन्, ‘संविधानले दिएको अधिकार माग्दा सरकारले अपराधी जस्तो व्यवहार गर्‍यो । राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी भएन ।’ जुन अधिकार जनताका नाममा नेताले सहजै उपभोग गरिरहेका छन्, त्यो अधिकार सर्वसाधारणले नपाएको डा. केसीको…
आइओएम डिन कार्यालय र परिक्षा शाखामा तालाबन्दी
काठमाडौँ,१६ भदौ । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । आन्दोलनरत विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट मात्र भर्ना लिन माग गर्दै तालाबन्दी गरेका हुन् । ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले पुरानै तरिकाबाट भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलित बनेका हुन् । दुई विश्वविद्यालयअन्तर्गत डिन कार्यालयका परीक्षा शाखामा समेत तालाबन्दी गरिएका कारण प्रवेश परीक्षा प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । आईओएमले भदौ २१ देखि २३ लाई एमबीबीएसलगायत विषयका प्रवेश परीक्षाको समय तालिका तोकेको छ । स्कुल अफ साइन्सले असोज पहिलो सातालाई तोकेको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले पनि आफूअनुकूल भर्ना कार्यक्रम अघि बढाएका छन् । विद्यार्थीले संघर्ष समिति गठन गरेर यसअघि नै आन्दोलनको चेतावनी दिँदै आएका थिए । स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरूले कुल सिट संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र स्वदेशी/विदेशी संयुक्त लगानीमा खुलेका शिक्षण संस्थाले कुल २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रूपमा नेपाल…
मेडिकल माफिया विरुद्ध आन्दोलन गर्ने
काठमाडौ, ५ भदौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव पुत्र प्रकाश चन्दले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मेडिकल माफिया विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति बनाएर चन्दले आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । पछिल्लो समय मेडिकल क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्याका बारेमा अाफुहरुले अान्दोलन गर्ने चन्दले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । विप्लव पुत्रले पत्रकार सम्मेलन गर्ने जानकारी पाएपछि रिपोर्टर्स क्लबमा व्यापक मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियोे भने प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन हुनुपुर्व कार्यक्रममा को को सहभागी हुने भन्दै केरकार गरेको थियो । सम्मेलनमा पार्टी सम्बद्घ पत्रकार संगठन जनपत्रकार संगठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीको सहभागीता रहेको थियोे । पत्रकार सम्मेलन पछि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति यस्तो छ "सम्पूर्ण प्रगतिशील विद्यार्थी र चिकित्सकहरु एक हौँ, चिकित्सा शिक्षाका दलाल, माफिया र भ्रष्टाचारीविरुद्ध संघर्ष गरौँ ।" चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियान ! नेपालको इतिहासमा ठूलाठूला संघर्ष र बलिदानका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि स्वर्णिम अक्षरमा लेखिएका छ्न । विभिन्न स्वरुपहरु बदल्दै यो संघर्ष अहिले पनि जारी छ…